Ethereum Yintoni kwaye uyithenga njani i-Ethers? Konke malunga ne-blockchain | Iindaba zeGajethi
UMiguel Gaton | | Imali engezantsi yedijithali, Izaziso, Te knoloji
I-Etherum ayisiyondawo ilula kwiBitcoin uqobo, kodwa endaweni yoko liqonga elisebenzisa ithuba kwitekhnoloji ye-blockchain (ikwasetyenziswa yiBitcoin) hayi kuphela ukubonelela ngenye indlela yokuhlawula efana neBitcoin, Ether, kodwa liqonga lophuhliso lwesoftware elinceda ekwakhiweni kweenkqubo ze-cryptocurrency ezabelana ngetyathanga leebhloko, eyaziwa ngokuba yi-blockchain, apho iirekhodi ezifakiwe zingenakulungiswa okanye ziguqulwe nangaliphi na ixesha.
Kodwa ukuba yintoni onomdla kuyo ukwazi Ukuba i-Ethereum yenye ye-Bitcon, impendulo nguhayi. Olunye uhlobo lweBitcoin olunikezelwa ngu-Ethereum lubizwa ngokuba yi-Ether, iqonga ngaphandle kweprojekthi ye-Ethereum esiza kukuxelela yonke into engezantsi ukuze wazi ukuba isebenza njani kwaye indlela yokuthenga i-Ethereum.
Ukuba ufuna ukuthenga i-Ethereum ngoku, fumana i- $ 10 SIMAHLA ekuthengeni kwakho ngokunqakraza apha
1 Yintoni i-Ethereum?
2 Yintoni u-Ether?
3 Ngubani odale u-Ethereum?
4 Enye into yeBitcoin
5 Ungayithenga njani i-Ethereum?
6 Yintoni i-blockchain?
7 Izivumelwano zeSmart
8 Ngaba kukho ibhabhalidi ye-cryptocurrency?
Njengoko ndibekile apha ngasentla, i-Ethereum yiprojekthi edibanisa imali yedijithali, i-Ether, njengeBitcoin, kodwa Usebenzisa amathuba esinikwa yi-blockchain, irekhodi elingenakuguqulwa kwaye oko ukusukela ekuzalweni kwe-Ethereum kuye kwajoliswa ekudalweni kwezivumelwano ezifanelekileyo. Iikhontrakthi ze-Smart, njengomthetho ngokubanzi, zibandakanya ukusebenza kwemali, zisebenza ngendlela esekuhleni kuwo omabini amaqela kunye nokusebenza kwazo kuyafana kakhulu neekhowudi zenkqubo Ukuba bayayenza loo nto. Oko kukuthi, ukuba oku kuyenzeka, kuya kufuneka uyenze le ewe okanye ewe.
Fumana i- $ 10 YOKUTHENGA SIMAHLA ngokuchofoza apha
Lonke olu lwazi lubonakalisiwe kwi-blockchain, irekhodi elingenakuguqulwa apho yonke imisebenzi ibonakala, nokuba kuyathengiswa okanye kuthengwa iingqekembe, iikhontrakthi ezifanelekileyo ... Ulwazi olugcinwe kwiqonga le-blockchain luyafikeleleka kuwo wonke umntu kwaye luyafumaneka kuzo zonke iikhompyuter ezenza inethiwekhi ye-Ethereum. Ukusebenza kweBitcoins blockchain ngokufanayo, kodwa irekhoda kuphela idatha yokuthengiselana, kuba amathuba anikezelwa yile teknoloji akwandiswanga.
Iqonga le-Ethereum ayisiyo imali ngokwayo. Inkqubo ye- I-Ether yimali yeqonga le-Ethereum, kwaye esinokuthi senze ngayo iintlawulo ebantwini bezinto okanye iinkonzo. I-Ether yenye yeemali ezifumaneka kwiimarike eziye zaqaliswa ukukhuphisana neBitcoins, kodwa ngokungafaniyo neyokugqibela, i-Ether ifakiwe ngaphakathi kweqonga elisebenzisa ngokupheleleyo iibhloko, ezibizwa ngokuba yi-blockchain.
Ether, njengeBitcoin alulawulwa ngawo nawuphi na umzimba wezezimali, ke ixabiso layo okanye ikowuteshini ayinxulunyaniswa nesitokhwe, izindlu nomhlaba okanye iimali. Ixabiso le-Ether linqunywe kwimarike evulekileyo ngokuthenga kunye nokuthengisa imisebenzi ekhoyo ngelo xesha, ke ixabiso layo liya kutshintsha ngexesha lokwenyani.
Ufuna I-10 $ yasimahla xa uthenga i-EtH yakho? Kulungile cofa apha
Ngelixa inani leBitcoins lilinganiselwe kwizigidi ezingama-21, I-Ether ayikhawulelwanga, kungoko ixabiso layo okwangoku li-10 amaxesha asezantsi kuneBitcoins. Ngexesha lokuthengisa kwangaphambili okwenzekileyo ngaphambi kokumiliselwa kwe-Ethereum, i-72 yezigidi ze-Ether zenzelwe bonke abasebenzisi abenze igalelo ngeqonga leKickstarter kwiprojekthi nakwisiseko se-Ethereum, esiya kuthi, njengoko siza kubona, sisinike okunye okubaluleke ngakumbi. ezixabisekileyo. Ngaphantsi kwemigaqo eyenziweyo ngexesha lokuthengisa kwangaphambili kwi-2014, ukukhutshwa kwe-Ether kukhawulelwe kwizigidi ezili-18 ngonyaka.
Ngaba uyafuna ukutyala imali kwi-Ethereum?
Cofa apha ukuze uthenge ii-Ethers
Ngubani odale u-Ethereum?
Ngokungafaniyo neBitcoins, umdali we-Ethereum unegama lokuqala kunye nelokugqibela kwaye akafihli. UVitalik Buterin waqala uphuhliso lwe-Ethereum ngasekupheleni kuka-2014. Ukuxhasa ngezimali uphuhliso lweprojekthi, uVitalik wafuna inkxaso-mali kuluntu, enyusa ngaphezulu nje kwezigidi ezili-18 zeedola. Ngaphambi kokugxila kwiprojekthi ye-Ethereum, uVitalik wayebhala kwiiblogi ezahlukeneyo malunga neBitcoins, kulapho ke waqala khona ukuphuhlisa ukhetho olunokuthi itekhnoloji esebenzisa iBitcoin ingamnika kwaye de kube lelo xesha lichithwe.
Enye into yeBitcoin
Okwangoku kwimarike singafumana inani elikhulu lezinye iindlela kunamandla onke eBitcoin, kodwa njengoko ixesha lihamba, eli nani liye lancitshiswa kakhulu Etere, Litecoin kunye neRipple njengezinye iindlela ezisetyenziswa kakhulu ngabasebenzisi. Uninzi lwempumelelo uEther anayo, sinombulelo kuyo yonke iprojekthi ye-Ethereum esemva, kuba ukuba ibiyenye into ebinokuyenza, ngekhe ikwazi ukubamba ikota yemisebenzi eyenziwayo kwihlabathi liphela ngeemali ze-cryptocurrencies , apho iBitcoin ingukumkani phantse i-50% yezorhwebo.
Ungayithenga njani i-Ethereum?
Emva koko siza kuchaza indlela yokuthenga i-Ethereum Okanye mandithi, ungayithenga njani i-Ethers eligama le-cryptocurrency.
Ukuba lukhuphiswano ngqo kwiBitcoin, ukuze ube nakho ukubandakanyeka ngokupheleleyo ekudalweni kwe-Ethers sifuna ikhompyuter enamandla, uqhagamshelo lwe-intanethi kunye nesoftware eyimfuneko ukuze ube nakho ukuba yinxalenye yomnatha oyidibanisayo, kwaye ke uqalise ukufumana olu hlobo lwemali yedijithali. Ukuthatha ingqalelo ukuba iBitcoin yaqala ukusebenza ngo-2009, isicelo kunye neefolokhwe ezahlukileyo esinokuzifumana kwimarike zisebenza ngokugcweleyo, into esingenako ukuyithetha nge-Ethereum ngalo mzuzu.
Singakhetha kwakhona umkhondo okhawulezayo kunye thenga i-Ethereum ngokuthe ngqo le mali ngeenkonzo ezifana neCoinbase, inkonzo ekwasivumela ukuba sigcine ii-cryptocurrensets zethu ngokukhuselekileyo.
Ukucacisa iingenelo esizifumana ku-Ethereum, kuya kufuneka sithethe nge-blockchain, umthetho olandelwayo osetyenziselwa ukulawula zonke iirekhodi kunye nokusebenza okwenziwa kunye no-Ether, Inkqubo efanayo esetyenziswa ziiBitcoins kodwa banike into ebaluleke ngakumbi enika ukhuseleko.
I-blockchain yirejista apho lonke ulwazi olunxulumene ne-cryptocurrensets lugcinwa. I-cryptocurrency nganye isebenzisa irejista eyahlukileyo. Le rekhodi ayinakuhlelwa okanye ilungiswe nangaliphi na ixesha ikwabonakala kubo bonke, ukuze nabani na akwazi ukufikelela kuyo. Ukukhuselwa kulungiso olunikezelwa yi-blockchain yeyona nto iphambili kuyo kuba inokusetyenziselwa ukwenza iikhontrakthi zeSmart.
Enkosi ku-Ethereum unokwenza izivumelwano ukuba imiqathango ebhaliweyo izalisekisiwe, iya kuzalisekiswa ukuba okanye ngokuzenzekelayo ngaphandle komntu wesithathu ekufuneka anike ukuqhubeka. Imeko yokujonga imeko yeemeko ezinokuthi zifezekiswe inokukhethwa kwimithombo esekwe ngawo omabini amaqela. Inkqubo yebhanki yenye yezona zinomdla wokufumana olu hlobo lwekhontrakthi oluzenzekelayo ngezivumelwano zedipozithi kunye nabanye kubaxumi, kuba oko kuya kuthintela iimpazamo ezinokwenzeka kubantu ukongeza ekuvumeleni ukusebenza ngokuzimela.
Khawufane ucinge ukuba unayo ipotifoliyo yokhuseleko apho umisele imeko yokuba ukuba ixabiso lokhuseleko oluthile lifikelela kwinani X zithengiswa ngokuzenzekelayo. Ngekhontrakthi ehlakaniphileyo ye-Ethereum akukho mntu kuya kufuneka angenelele, Akukho mntu kufuneka azi ixabiso ngalo lonke ixesha ukuze aqhubeke nokuthengisa izabelo xa efikelela kwixabiso elithile.
Nangona yonke into ikhangeleka kwaye intle kakhulu, kufuneka ikhunjulwe into yokuba olu hlobo lwesivumelwano alunakulungiswa, xa sele lufakiwe kwirejista kuphela ukuba unokurhoxisa ukuba imeko ibekiwe evumela oko. Kananjalo imiqathango yesivumelwano ayinakuguqulwa, kuba njengoko ndiphawule ibhloko ye-blockchain yirekhodi engenakuhlelwa okanye iguqulwe nangaliphi na ixesha.
Ngaba kukho ibhabhalidi ye-cryptocurrency?
Njengalo naluphi na olunye uhlobo lweeasethi, ii-cryptocurrensets zichaphazeleka kumabhamu anyusa ixabiso lawo ngaphezulu kwexabiso lazo lokwenyani. Kwimeko yee-cryptocurrensets, ukufumanisa i-bubble kunokwenzeka ngumsebenzi onzima ngakumbi kunezinye iintlobo zeeasethi okoko Phantse akunakwenzeka ukumisela ixabiso eliyinyani lento njenge-ethereal njenge-cryptocurrency. Ixabiso le-Ether lilungiswe ngumthetho wonikezelo kunye neemfuno, kokukhona abantu bathenga ii-Ethers, kokukhona amaxabiso alo enyuka kwaye ngokuchaseneyo, ezinokubangela ukuba ixabiso langoku lichaphazeleke ngamandla ngabaqikeleli abathenga bathengise ii-cryptocurrensets zokucinga kuphela cinga ngexabiso laso. Uncedo uEther analo ngaphezulu kweBitcoin kukuba ubuninzi balo abuphelelanga kwiiyunithi ezingama-21 ezigidi kodwa ukuba i-ether ezizigidi ezili-18 zikhutshwa nyaka ngamnye eziza kunceda ukunciphisa amaxabiso kwixabiso.
Nangona kunjalo, kunzima ukwazi ukuba ngaba sijamelene neqamza okanye hayi, kuba ezinye iingcali zikujonga oko kwiminyaka emi-5 ukuya ku-10 amaxabiso e-Ether angangaphezulu kwamaxesha ali-100 elikhoyo ngoku nto leyo ebonisa ukuba isenohambo oluphezulu oluphezulu.
Ukuba u-Ethereum ukuqinisekisile kwaye ufuna ukuba yinxalenye yale mali yedijithali, Apha ungathenga i-Ethers. Ngaba awukakhuthazi thenga i-Ethereum?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Te knoloji » Ethereum Yintoni kwaye uyithenga njani i-Ethers?
Ethereum! Yeyiphi imali entle, ukuthanda kwam ekhuselekileyo okanye ngoqikelelo ngakumbi lwenkqubo ye-cryptocurrency ecosystem
Sele ndiyithengile i-ETHs yam 🙂
UFrancisco Villarreal Guijo sitsho
Ndinomdla wokutyala imali e-Ethereum. Lingakanani elona xabiso liphantsi lokutyala kwaye ndingalufumana njani utyalo-mali?
Imibuliso F. Villarreal
Ndinomdla wokutyala imali e-Ethereum. Lithini elona xabiso liphantsi lokuthenga i-ethereum kunye nendlela yokufumana kwakhona utyalomali.